Halkee Marayaan Xiisadaha Dhanka Siyaadda Wadanka Qadar?. – Bogga Calamada.com
Halkee Marayaan Xiisadaha Dhanka Siyaadda Wadanka Qadar?.
June 28, 2017 7:02 am Views: 119
Xukuumadda Qadar ayaa ganafka ku dhuftay dalab ka yimid dowladaha sedaxda khaliijka iyo Masar kuwaas oo xayiraad dhan walba ah kusoo rogay xukuumadda Dooxa.
Wasiirka arrimha dibadda Qadar ayaa shir Jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay in haba yaraatee aysan u hoggaansami doonin 13 qodob oo shardi looga dhigay in xayiraadda laga qaado Qadar waxaana shuruudahaas kamid ah in ay xirto Telefeshinka afka dheer ee Aljazeera iyo in ay dalkeeda ka erido Ururka ikhwaanul muslimiin iyo xarakada wax iska caabinta Xamaas.
Max’med Bin C/raxmaan Aala Thaani oo ah wasiirka arrimaha dibadda Qadar ayaa go’aanka 13-ka doqob ka kooban ee kasoo baxay xulufada saxuudiga ku tilmaamay mid “laga yaaq yaaqsoodo” wuxuuna ugu baaqay dowladaha reergalbeedka in ay cadaadis saaraan dowladaha khaliijka si dalkiisa xayiraadda looga qaado.
Dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in suurtagal aysan aheyn aqbalidda qaar kamid ah shuruudaha kayimid dowladaha khaliijka balse loo baahanyahay in xulufada Mareykanka ee mandiqada Bariga loo bixiyay ay wadahadlaan.
Madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka Turkiga ayaa isna cambaareeyay dalabka xulufada sacuudiga iyo imaaraatka ee ah in qadar ay meesha ka saarto saldhigga melleteri ee Turkigu ka sameystay magaalada Dooxa.
Wasiirka arrimaha dibadda Qadar iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibada Kuwait ayaa magaalada Washinton kula kulmay madax katirsan Mareykanka waxaana socda dadaallo ladoonayo in lagu xalliyo khilaafka u dhaxeeya wakiillada Mareykanka ee Bariga dhexe.
Isbahaysiga Mareykanku hoggaaminayo ayaa ka walwalsan in khilaafka u dhaxeeya wakiilladiisa khaliijka uu saameeyo dagaalka uu kula jiro Jamaacaadka Jihaadiga ah maadaama saldhigga ugu weyn ee Mareykanku dibadda ku leeyahay uu kuyaal magaalada dooxa ee wadanka Qadar.